Taunggyi - The Cherry Land: ရှမ်းစာစကား(၁)
ကျွန်တော် အခုတစ်ခေါက် ခရီးသွားရင်း ပဒေါင်ရွာတွေ၊ လားဟူရွာတွေ၊ ပအိုဝ်း ရွာတွေ ရောက်ခဲ့ပါတယ်.. သူတို့ တတွေအားလုံးက မြန်မာစကားမပြောတက်တော့ သူတို့ ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ကျွန်တော် နားမလည်ခဲ့ဘူး.. ကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုလဲ သူတို့ မသိဘူး.. အဲ့ဒီမှာပဲ ကျွန်တော် ရှမ်းစကားလေး အခြေခံလောက် သင်ခဲ့ရင် ကောင်းသားလို့ အတွေးပေါ်ခဲ့ပါတယ်..
ရှမ်းပြည်ကို ကျွန်တော်စရောက်ကတည်းက ဆိုရင် ၄နှစ်ကျော်ရှိပြီ.. တကယ်ဆို ရှမ်းစကားလေး ၁ခု၊ ၂ခုလောက်တော့ ထမင်းစားရေသောက် ပြောနိုင်ရမှာ.. အဲ့ဒီလိုသာ ပြောနိုင်ခဲ့ရင် တိုင်းရင်းသားတွေကို သူတို့ ဘာသာစကားနဲ့ နှုတ်ဆက်နိုင်မယ်.. ရင်းနီးနိုင်ခဲ့မှာ..
ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ ရှမ်းသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဆီမှာ ရှမ်းစာ၊ စကား သင်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်.. ဒါပေမဲ့ အသံထွက် ကာ၊ ကာ,၊ ကာ; ၊ ကား၊ ကာ့ ငါးမျိုးသင်ရင်းနဲ့ အချိန်တော်တော် ကုန်သွားခဲ့တယ်.. ဘယ်လိုမှ မထွက်တက်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်..
ရှမ်းသူငယ်ချင်းကလဲ သင်ပေးရှာပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကာ; တစ်လုံးကို ဘယ်လိုမှ မပြောတက်ခဲ့ဘူး.. ကျောင်းမှာ အချိန်ရတိုင်းလဲ တစ်လုံးစ၊ နှစ်လုံးစ သင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ မေ့မေ့ ပြောက်ပြောက်တွေ ဖြစ်ကုန်ခဲ့တယ်..
အခုတော့ ရှမ်းစကားလေး ထမင်းစား၊ ရေသောက်၊ အလာပသလာပလေး ပြောနိုင်အောင်.. သူတို့ ပြောတာလဲ နားလည်နိုင်အောင်လို့ လေ့လာရင်း ရှမ်းစာမသိတဲ့သူတွေ အတွက် တောင်ကြီးချယ်ရီမှာ ဖော်ပြသွားမလားလို့ စဉ်းစားမိတာနဲ့ အခု ရှမ်းစာစကား(၁)ကို ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်.. ရှမ်းစကားတက်သူတွေကလဲ ဘယ်သူမှ တုတ်တုတ်မလှုပ်လို့ မတောက်တခေါက်နဲ့ပဲ ကျွန်တော် အနည်းငယ် ရွှီးကြည့်ပါတော့မယ်.. အမှားများပါရင်လဲ ပြင်ပေးကြပါလို့...
ပထမဆုံး သင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးလေးတွေ က..
ချင် (want) ဆိုရင် `ခိုက်´
No ဆိုရင် `အမ်´
Yes ဆိုရင် `အေ(၀်)´
အဲ့ဒီစာလုံးတွေက စပြီး ကျွန်တော် ရှမ်းစာတွေနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ပါတော့တယ်..
ရှမ်းမဟုတ်တဲ့သူက ရှမ်းစာအကြောင်း ပြောပြနေတာ အမြင်မတော်ရင်လဲ ၀င်ရောက် ကူညီနိုင်ပါတယ် နော့်.. :)
ရေးသားသူ yma အချိန် 8:28:00 AM
“ပထမဆုံး သင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးလေးတွေ က..
ရည်းစားကို `စု´” ဆိုတော့ ဖတ်ရင်း နည်းနည်းတော့ ပြုံးမိတယ်.. :)
ရှမ်းစကားက ထိုင်းစကားနဲ့ ဆင်သလိုပဲ.. အမထင်တာပါ။ ထိုင်းတွေလည်း ထမင်းကို “ခေါက်” လို့ပဲ ခေါ်တယ်။ ကျန်တာတွေတော့ သိပ်မသိပါဘူး။
Friday, August 31, 2007 9:41:00 AM
Friday, August 31, 2007 11:31:00 AM
သင်ပေးတဲ့သူက ဘာသင်ပေးပေး လိုက်ဆိုရတာပေါ့ဗျ.. :)
[စု] စရာလဲ မရှိသေးပါဘူး.. အမှတ်လွယ်တာလေး သင်ပေးတာနဲ့ တူပါတယ်.. :) ဟုတ်မယ် ပအိုဝ်း နဲ့ ထိုင်းနဲ့လဲ ဆင်တယ်လို့ ထင်တယ်.. ကြားရတာ နဲနဲတူသလိုပဲ..
မနန်းရေ `ပု´လိုက် ပါပြီဗျ.. :)
ထိုင်းဆို လို့ဆာဝါရီခ ဆိုတဲ့ တစ်လုံးပဲ တတ်တယ်.. သင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. :)
Friday, August 31, 2007 1:50:00 PM
Friday, August 31, 2007 2:06:00 PM
မပျောက်ပါဘူး ကိုရဲမြန်မာရေ.. တောင်ကြီးအတွက် ရေးမယ် ရေးမယ် ဆိုပြီး ဘာရေးလို့ရေးရမှန်းမသိတော့လို့ပါ။ :)
Friday, August 31, 2007 3:21:00 PM
ကျားကို “ ဆေ”
“ကွာကွာ မားမား” သွားသွားလာလာ
ရှမ်းပြည်မှာ ကြီးပြီး ရှမ်းစကားကို ကျွန်မလည်း အကျွမ်းတ၀င် မတတ်ခဲ့ဘူး။
သူငယ်ချင်းတွေက ဓနု၊ ရှမ်းတွေဖြစ်ပေမဲ့ ရှမ်းစကားကို ထမင်းစားရေသောက်လောက်ပဲ
Saturday, September 01, 2007 8:19:00 PM
Saturday, September 01, 2007 11:12:00 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မနန်းရေ.. ဆဝပ်ဒီခါး ဆိုတာ ဘာလို့ (၂)မျိုးကွဲနေတာပါလဲ.. မင်္ဂလာပါလို့ ပြောတဲ့ စကားလုံး ဟုတ်ဘူးလား.. နှုတ်ဆက်ရင်ပြောတာ ကြားဖူးလို့ မှတ်ထားတာ.. Meaning တော့ သေသေချာချာမသိဘူး..
Sunday, September 02, 2007 8:30:00 AM
အော် ဟုတ်ကဲ့ဗျ.. မနန်းရေ အခုမှ ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားက အထီးလား အမလား သိတော့တယ်.. :)
အခုလို ရှင်းလင်း ဖြည့်စွက်ပေးကြတဲ့ မနိုင်းနိုင်းနဲ့ မနန်းကို ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ် ခရပ်.. :)
Sunday, September 02, 2007 1:55:00 PM
I amaShan national. But, I cannot speak Shan Langaue very well. So, I wanna learn it to save our national singature. You are welcomed warmly to continue your effort. I will be waiting for your post.
Saing Khan Tun
Thursday, December 27, 2007 12:36:00 AM
တောင်ကြီး အင်းလေး ဒေသတွေနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ ထိရတာ
ဒီတခါ ဗမာပြည်ပြန်ရင် ဘုရားပွဲအချိန် ပြန်မယ်စိတ်ကူးတယ်။
Thursday, January 17, 2008 1:52:00 AM
အသံထွက်တွေမှန်ပါတယ်။ တောင်ကြီးကို မရောက်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားပြီ။ အားလုံးအမှတ်ရ စရာတွေချည်းပါပဲ။ အစ်ကို့ အိမ်ကို ဒါပထမဆုံးရောက်ဖူးတာ ဖြစ်တယ်။
Tuesday, September 16, 2008 12:12:00 PM
ယူလီဟား ..နေကောင်းလား ..
မိုင်ဆွန်ခ .. မင်္ဂလာပါ ..
ထည့်မယ်ဆို အများကြီးပဲနော့ ..
i'm really shan
sorry,that not my computer,that why i can't use myanmar form.
if u want to write shan voice *a tan htow* u use english is better.
coz myanmar (tar ya) have only 3
shan have 6,if u use myanmar form who read that can wrong,ok?
if u want to go to really shan (toung paw) contact me .i can help u,but wait for2year,ok?.thz
Thursday, November 06, 2008 1:49:00 PM
Thursday, November 06, 2008 1:52:00 PM
Sunday, November 16, 2008 8:55:00 PM
ကျွန်တော်လဲ အစ်ကိုအိမ်ကိုလာလည်ပြီးပါပြီ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်က ရှမ်းမဟုတ်ပေ မဲ့ ရှမ်းစကားကို ရှမ်းတွေနဲ့ပြိုင်ပြောနိုင်တဲ့ အဆင့်ရှိပါတယ် အစ်ကိုရေးထားတာတွေမှန်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့ အသံထွက် တိတိကျကျ ရေးလို့မရလို့ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် "ယင်းchom ရောက်ခါ" ရှမ်းလိုပါ ရှမ်းမကိုတွေ့ရင် "နောင့်shao ဆူhanလီ တေ့ရောက်(လ်)" လို့ပြောပါ သူပြုံးလိမ့်မယ်
"ဂှဝ်;ဂှဂ်,သူ" i love you လို့ပြောတာပါ အသံထွက်က "ဟောင်းhart စူ" ပြောဖို့မမေ့နဲ့နော် ကျွန်တော်ကတော့ ကချင်နဲ့လီဆူ ကပြားပါ ကချင်ပြည်မှာမွေးပြီးရှမ်းပြည်မှာကြီးပြင်းလာတာပါ တိုင်းရင်းတာစကား(၇)ကို အထူးတက်ကျွမ်းကျင်ပါတယ် တောင်ကြီးမှာလည်းကျောင်းတက်ဖူးပါတယ် မြေဖြူရပ်ကွက်မှာနေပြီး အ.ထ.က(၉) မှာ ပညာဆည်းပူးခဲ့ပါတယ် ယခုလက်ရှိက မလေးရှားမှာပါ ရှမ်းစကားသင်ချင်ရင်တော့ mbslnhytm@gmail.com & mbslnhytm@hotmail.com ကို လာပါ
Sunday, April 26, 2009 10:12:00 PM
ဆောင်လုံ ကို ** အပျိုကြီး **
Tuesday, September 01, 2009 7:28:00 PM
ရှမ်းစကားကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကို့ကို လေးစားပါတယ်
Saturday, November 20, 2010 1:17:00 PM
I can help you I live in pyinoolwin
I am shan nation
If you more want to know contant me
my gmail account is thantzinoo049.
Saturday, November 20, 2010 1:22:00 PM
Friday, December 18, 2015 2:48:00 PM
Friday, May 27, 2016 4:56:00 PM
Monday, July 25, 2016 3:40:00 PM
Monday, August 01, 2016 9:04:00 PM
Tuesday, August 02, 2016 8:02:00 AM
Saturday, June 10, 2017 7:14:00 AM
Thursday, December 14, 2017 7:30:00 AM
Friday, March 23, 2018 1:35:00 PM
Monday, September 03, 2018 9:32:00 AM